Miisaanka Anqawga - Layliga ugu Wanaagsan ee aad ku Samayn Karto | Bezzia
Susana godoy | 11/01/2022 16:00 | Jimicsiga
Miisaanka canqowga ayaa noqday mid ka mid ah qalabka ugu badan ee la raadsado. Waxay u muuqataa in ay noqdeen kuwo moodada ah oo waa run in aad loogu talinayaa in ay ka shaqeeyaan in yar oo dheeraad ah oo ku saabsan gudaha lugaha, iyaga oo kor u qaadaya xooggooda iyo qaar kale oo badan. Maadaama ay ku dari doonaan dadaal dheeraad ah dhaqdhaqaaq kasta oo aan samayno. Laakiin ka digtoonow, waa inaad had iyo jeer ka taxadartaa miisaanka aad saarayso si aad uga fogaato dhaawac.
Xaqiiqdu waxay tahay inay yihiin kuwo wax ku ool ah oo iyaga aad ku jimicsan karto guriga, si fudud. Laguma tilmaamo marka aan ka hadlayno cilmiga hawada Dhammaanteen waan ognahay sida ay noqon karto in orod loo baxo. Sidaa darteed, haddii aad sharad ku sameyso miisaannadan, kaliya waxaad u baahan doontaa inaad sameyso hab joogto ah sida kan hoose oo kale waxaadna bilaabi doontaa inaad aragto natiijooyin aad u fiican sida ugu dhakhsaha badan ee aad filayso.
1 Miisaanka canqowga: laad xabag
2 Lug baa kor u kacaysa
3 Fadhiga Bulgaariya
4 Lugaha fidsan
Miisaanka canqowga: laad xabag
Mid ka mid ah jimicsiyada ugu horreeya ee aan sameyn karno waa kan. Waa waxa loo yaqaan laad laad sababtoo ah si aan u bilowno, waxaan dib u riixi doonaa hal lug laad ahaan. Dabcan, waxaan ka bilaabi doonaa booska afar geesoodka ah, anagoo isku haysanayna calaacalaha gacmaha dhulka, gacmaha oo fidsan iyo dhabarka toosan. Jilbahu waxay taabtaan dhulka, sida aynu nidhaahno, waa in aynu hal lug dib u tuurno ka dibna u beddelnaa kan kale. Xasuusnoow marka aad laabta laabiso ama marka aad soo qaadatid, aad u keeni karto laabtaada si aad mar kale u kala bixiso. Ku celceli dhowr jeer lug kasta.
Lug baa kor u kacaysa
Waa run in layligan oo kale uu leeyahay kala duwanaansho kale. Waxaad samayn kartaa adigoo taagan, adigoo ku tiirsan gidaarka ama si fudud u jiifso. Haddii aad doorato doorashadan ugu dambeeya waa inaad Dhinac u jiifso oo ku taageer jidhkaaga dhulka, ka caawinta cududdaada inay dejiso naftaada. Waa waqtigii kor loo qaadi lahaa lugta liddi ku ah, si markaas aad tartiib ugu dhaadhacdo. Sida jimicsigii hore, way ku habboon tahay in la sameeyo dhowr ku celcelin ka dibna la beddelo dhinacyada. Haddii aad sameyso adigoo taagan, waa inaad ka taxadartaa miskahaaga iyo jidhkaaga si uusan u wareegin. Markaa, waxaad ilaalin doontaa meel toosan oo aad u kala saartaa lugta aad ka shaqaynayso dhinac, laakiin adigoon meel kale ka saarin jidhkaaga sidaan soo sheegnay.
Kursi ku dheji gidaarka si aad u ilaaliso. Hadda dhabarka u soo jeedi oo taageer xagga sare ee cagtaada, ku dheji lugtaada kursiga. Jidhku waa toosan yahay iyo lugta kale, taas oo miisaankeedu yahay, sidoo kale. Si aan u bilowno isku-duubnida waa in aan laalaabnaa lugtii aan kala bixinnay laakiin iyada oo aan jilibku dhaafin suulasha. Markaad dhawr riix-up ku samaysay hal lug, waa inaad tan kale u beddeshaa.
Mid ka mid ah fursadaha ugu fudud ee aan haysano waa tan. Waxaan si fudud u jiifsan doonaa sariir dhabarkayaga ah. Iyadoo miisaanku ku yaal anqawyada, waxaan laalaabin doonaa jilbaha si aan u samayno xagal 90º.. Hadda waa inaan labada lugood kor u kala bixinnaa si aan mar kale u laabino. Hubaal marka hore waxay kugu kici doontaa xoogaa laakiin mar walba waxaad samayn kartaa ku celcelin yar.
Waanu dhaafi waynay fursada aanu wax ku samayn lahayn fadhi-ku-dirir leh miisaan canqowga ah. Waxay yihiin kuwo kale oo ka mid ah fikradaha waaweyn ee lagu dhejiyo lugaha in yar oo lagu dhejiyo inta aan sidaas oo kale ku sameyneyno caloosha. Sidaa darteed, u jiifsanayna sidii aan ku jirnay jimicsigii hore, ayaanu lugahayada mar labaad ku leexinaynaa xagal 90º ah. Waa waqtigii laga tagi lahaa iyaga oo sarreeya waana in aan sidoo kale la mid ah samayno jidhka. Xasuusnoow in gacmuhu aysan luqun soo jiidin wakhti kasta, iskumana dayi doono inaan hore u socono, laakiin jidhku wuxuu noqon doonaa dhidibka dhaqdhaqaaqa la sheegay. Jadwal wanaagsan oo lagu bilaabo tababarkaaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Jimicsiga » Jimicsiyada lagu sameeyo miisaanka canqowga